Ny Fanambadiana Sampan-Draharaha Nataly. Famoronana lehibe fifandraisana maharitra amin'ny zazavavy avy any Okraina an-tserasera
Ny Fanambadiana Sampan-Draharaha Nataly. Famoronana lehibe fifandraisana maharitra amin’ny zazavavy avy any Okraina an-tserasera
Ny fiarahana amin’ny zazavavy avy any Okraina dia toa tena tsara ny safidy ho fanorenana mafy sy ny fitiavana ny fianakaviana ho an’ny olona maro, izay efa nitombo mahafantatra ny tsy fahafahany mahita ny vehivavy ny nofy, toy izany koa ny fiainana ny soatoavina sy ny drafitra-ny, ny manodidina. Tamin’ny voalohany dia toa tsara, amin’ny roa ianao mba mahazo mahafantatra ny tsirairay, fampivelarana ny fifandraisana, ary tsy mitsaha-mitombo kokoa. Na izany aza, ny fotoana tonga raha te-mba ho azo antoka fa tsy ho farany mifanohitra ny mahazatra ny fomba fijery fa ny olona kokoa ny fahazavan-tsaina amin’ny fifandraisana, ny lehilahy matetika indrindra mifantoka amin’ny fahamarinan-toerana sy hitady ny androm-piainany mpiara-miasa ao amin’ny fanambadiana fahafahana misafidy. Noho izany, ianao mampiaraka ny ankizivavy iray ary te hanorina fifandraisana lehibe taminy, na dia talohan’ny fihaonana manokana.
Miezaka isika mba hahitana ny fomba lavitra fifandraisana mety ho lehibe ary maharitra. Fikarohana vao haingana hitany dia nampiseho fa lavitra ny fifandraisana dia amin’ny fomba maro matanjaka kokoa noho ny fifandraisana eo amin’ny mpivady miara-mipetraka na mifanakaiky. Izany dia amin’ny ampahany nanazava ny fihetseham-po akaiky eo amin’ireo mpiara-miombon’antoka — rehefa tsy afaka mamihina na hikasika ny malala vehivavy, dia manomboka ny tsiny toy izany tsotra fahafinaretana rehefa mihazona ny tànany, ka nanome azy fahazavana oroka, sy fotsiny mijery ny masony ka nahita ny tsikiny.
Lavitra fifandraisana mpiara-miasa miezaka ny mizara kokoa amin’ny tsirairay
Raha miara-mipetraka ny olona, maro ny tokantrano tapaka izay nanakana azy ireo tsy ara-dalàna ny fifandraisana. Ianao sy ny ampakarina, toy ny maro hafa, dia manana fotoana betsaka ho an’ny fifandraisana ary mahafantatra ny hafa tsara kokoa — na manao ahoana na mangidy ny feo, raha ny marina dia tsy manana na inona na inona mba hatao alohan’ny mihaona amin’ny olona. Noho izany, hankafy izany fahafahana hahita bebe kokoa momba ny malala vehivavy ho toy ny toetra, ary asehoy ny tenanao ho amin’ny tsara ny mazava. Mihevitra tsara ny antony ny hevitrao ny fifandraisana dia tsy miasa — dia mety ho tarihin’ny miely American stereotype ny fifandraisana, nanantitrantitra ny tokony ho miara-ara-batana sy ny fametrahana sarobidy amin’ny matetika mifanatri-tava ny fifandraisana. Mazava tsara, ny elanelana misy fifandraisana mifanohitra ireo soatoavina, fa izany no marina ho an’ny tovovavy avy ao Okraina.
Azo antoka fa tsy
Samy ao Rosia sy Okraina, maro ny fifandraisana ampiasaina ho niforona tao amin’ny sekoly na nandritra oniversite, araka izay zatovolahy dia nandeha mba hanompo — taona tany an-tafika, sy ny vehivavy niandry azy ireo mandra-vita ny asa fanompoana. Rehefa afaka izany, ny mpivady matetika nanambady, izay heverina ho tena tantaram-pitiavana mariky ny vehivavy ny fanajana ny fanambadiana. Ny fahaizana miandry ny lehilahy malala sy mahatoky azy dia toy izany no anisan’ny ny sampa tsy ampy amin’ny kolontsaina, noho izany dia tokony hatoky ny vehivavy no zava-dehibe ao lavitra fifandraisana. Ary na dia mbola manana ahiahy momba ny maha zava-dehibe ny fifandraisana taorian’ny dingana rehetra ireo — fotsiny ao an-tsaina foana fa ny olona manana ny fahaiza-manao nisy fiantraikany, na dia rehefa tsy eo. Izany dia ny fahatsapana ny tantaram-pitiavana fifandraisana, ary raha tsapanao fa hisy fiantraikany — ianao no tena ao mafy orina sy marin-toerana ny fatorana amin’ny okrainiana zazavavy
Chatroulette France - ny Lahatsary amin'ny Chat miaraka amin'ny frantsay ireo Tovovavy sy Tovolahy →